October, 2019 | Job Vacancy in Myanmar
2019-10-29 20:21:14 , တရုတျစာ အခွခေံ လုံးဝ မရှိသူမြာ…
တရုတျစာ အခွခေံ လုံးဝ မရှိသူမြားအတှကျ (၁)လပွတျ အမွနျ အတနျးလာပါပွီ ? တရုတျစာဆိုရငျ သငျ့အတှကျ အကောငျးဆုံး သငျတနျးကြောငျး ? Ph – 09 420 164 401 , 09 7780 90 320 ☎️Intelligent တရုတ်စာသင်ကျောင်းမှ နိုဝင်ဘာလတွင် တရုတ်စာ အခြေခံမရှိသူများအတွက် တစ်လပြတ် ကြားရက်အမြန်တန်းခွဲ အချိန်စာရင်း ထွက်ပါပြီ… တရုတ်စကားကို အချိန်တိုအတွင်း လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင် Intelligent သင်တန်းကျောင်းမှ အခြေခံမှစ၍ ကျွမ်းကျင်အဆင့်အထိရောက်အောင် သင်ကြားပေးနေပါပြီ… ✅✅✅ တရုတ်စာတတ်မြောက…
This entry was posted in Training and Class on 2019-10-29 by admin.
2019-10-23 14:33:16 , အနာဂတ်မှာပိုမိုတိုးတက်အားကောင်…
FOREX MARKET !!??
Forex ဆိုတာဘာကြီးလဲ ????
Forex ဆိုတာ Foreign Exchange ဆိုတဲ့စကားစုက
တချို့ကလဲ FX လို့အတိုကောက်ခေါ်ကြတယ်
Forex trading market ဟာဆိုရင် ကမ္ဘာ့ရွှေ နဲ့ငွေကြေး‌ တွေကိုအဓိကထားပီးအရောင်းအ၀ယ်လုပ်တာဖြစ်တယ် ။အရမ်းကိုငွေ‌ဖြစ်လွယ်တဲ့ ‌ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်ကြီးလို့လဲဆိုနိုင်တယ်
New stock exchange (NYSE) ရဲ့ တနေ့တာ ကုန်သွယ်မှု amount 22.4 $ billion ထက်ကို ကျော်လွန်ပီး FXမှာ တစ်ရက်ကို 5.3 trillion လည်ပတ် နေတဲ့အပြင်
ဒီ market ထဲမှာ smart phone လေးတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ internet ချိတ်ဆက်ပီး တစ်ပတ်ကို 5ရက်နဲ့ တစ်ရက်ကို 22 hr လုံးလုံး တစ်ပြိုင်နက်တည်းအရောင်းရော အ၀ယ်ရောပါ လုပ်လို့ရသည့်အတွက်တခြား
?ဒီလို market ထဲမှာ ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်တွေ ရှာရမလဲ၊ ဘယ်လိုအရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရမလဲ ဆိုသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပီး ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့တွင် Forex Basic training course ကို အတွေ့အကြုံ 5နှစ်နှင့်အထက်ရှိသော ဆရာကိုယ်တိုင် စာတွေ့ရောလက်တွေ့ပါသင်ကြားပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်
?အချိန်နဲ့အမျှ မိမိဝင်​ငွေကို တိုးပွားချင်ကြသူများ
?Secondary Business အ​နေနဲ့ လုပ်ကိုင်လိုသူများ
?အိမ်မှာပဲ ထိုင်​နေပြီး ဝင်​ငွေရှာလိုသူများအ​နေနဲ့ အထူးသင့်​တော်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်
_ U Phyo Kyaw Khant (Jonney)
_ Business Manager at CMX International Trading Company
_ Founder of CMX Advisor Team????
26.10.2019 မှ 30.10.2019 အထိ
Up to 30% dis လဲရှိသေးတယ်နော်။
?10 ရက်နေ့မတိုင်ခင်- 30% discount
?20ရက်​နေ့မတိုင်ခင်- 20 % discount
?25 ရက်နေ့မတိုင်ခင်- 10% discount
လိပ်စာ။ ။အမှတ်138/142,White Cloud Condo, Unit 4C,သိမ်ဖြူလမ်း ဗိုလ်တ‌ထောင်မြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့။
This entry was posted in Training and Class on 2019-10-23 by admin.
2019-10-22 21:23:18 , #စာမေးပွဲ ( လုံးဝ) ဖြေစရာမလိုတ…
#စာမေးပွဲ ( လုံးဝ) ဖြေစရာမလိုတဲ့ #Diploma In Financial Management (UK)
#ပုံမှန်သင်တန်းကြေး – ၄၀၀,၀၀၀ကျပ်
(ပထမဆုံးအပ်နှံသူ (၁၅)ယောက်အတွက်#အထူးသင်တန်းကြေး -၁၂၉,၀၀၀ကျပ်)
? 27 Oct 2019, Time – 10 AM – 12 PM
(အစောဆုံးအပ်နှံသူ ၁၅ ဦးအတွက် သင်တန်းကြေး
-လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူများ ၊
-ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများ ၊
-မိမိဌာနအလိုက် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းမှာ တာဝန်ယူထားရသောသူများအတွက် မသိမဖြစ် ၊မပါမဖြစ် အရေးပါတဲ့ စာရင်းအင်း ပညာ“ Financial Accounting ” ကိုစနစ်တကျလေ့လာလိုသူများတက်ရောက်သင့်ပါတယ်…
-Introduction To Accounting and Management
-The Role of an Accountant and Finance
-Accounting Concept and Standards
-Journals and Subsidiary Books
BBA,MBA,Ph.D ဘွဲ့ရဆရာ၊မများမှစာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပေးမှာ ဆို တော့ သင်ကြားမှု ပိုင်းအတွက် ကတော့ အာမခံပါတယ်
✔️သင်တန်းပီးရင် ဘယ်နိုင်ငံက ပေးတဲ့ လက်မှတ်ရမှာလဲ?
NCFE customized Diploma အသိအမှတ်ပြု Professional Diploma လက်မှတ်ကို ရရှိမှာနော်
မပူပါနဲ့ သင်တန်းပြီးဆုံးအောင်တက်တဲ့ Assignment တင်သူတိုင်းကို5Star အဆင့်ရှိတဲ့ Hotel ကြီးတွေမှာ ကျင်းပပေးပါတယ် ။
ဘာကြောင့် Diploma in Financial Management ကို တက်သင့်ပါသလဲ?
?စာတွေ့ လက်တွေ့ သင်ကြားပေးမည့်အပြင် လုပ်ငန်းတွင်း အတွေ့အကြုံများသာမက Bonus Module တွေပါလေ့လာခွင့်ရခြင်း
?သင်တန်းပြီးဆုံးပါက အစဉ်အလာကြီးမြင့်သော NCFE UK မှ အသက်မွေးကြောင်းဒီပလိုမာကို တိုက်ရိုက်ရရှိမှာဖြစ်ခြင်း
?အလုပ်တဖက်နဲ့မို့ စာမေးပွဲကိုကြောက်သောသူများ အထူးသတင်းက Examဖြေစရာမလိုတော့တဲ့အတွက် အတန်းထဲမှာ Class Acitivities များ၊ Group Presentation များ၊ Assignment များကပါ အမှတ်ရနိုင်ခြင်း
?�ပိတ်ရက်တစ်ရက်ပဲ အချိန်ပေးရပြီး အလုပ်လုပ်ရင်းဘဝတိုးတက်ချင်သူများအတွက်ကောင်းမွန်ခြင်း
# ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ အချက်တွေကြောင့် အခုပဲ စာရင်းပေးသွင်းအပ်နှံ လိုက်ကြရအောင်နော်??
နေ့မှာ မြန်မာငွေ ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ် သွင်းပေးရပါမယ်
# ပညာပါရမီကျောင်းသားဟောင်းများအတွက် Discount + Promotin(100,000Ks) နှစ်ထပ်ကွမ်းခံစားခွင့်ဖြင့် UK Diploma တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်နော် ….
– 09 797426555 – 09 797530222 သို့ စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။ရွှေပြည့်စုံ စားသောက်ဆိုင်(အပေါ်ထပ်)၊( ရွှေညောင်ပင် – ဆေးခန်း နှင့်ရွှေညောင်ပင် – ဒံပေါက်ဆိုင် ကြား )
This entry was posted in Training and Class on 2019-10-22 by admin.
2019-10-22 15:10:28 , 100% Free Class လေး ရယူဖို့ (…
? 100% Free Class လေး ရယူဖို့ (Sunday Only)
#Certificate In #Business #Management
သင်တန်းကြေး 29,000ks (Free TShirt လက်ဆောင် 1 Nov မတိုင်ခင်အပ်ပေးပါ) Diploma Promotion ရှိ..
အလုပျခှငျသို့ စတငျဝငျရောကျလုပျကိုငျမညျ့သူမြားအတှကျ ပထမဆုံးခွလှေမျးတဈလှမျးဖွဈတဲ့ #Business Management သငျတနျးကိုတကျပါ
Business Management မှာဘာတှသေငျပေးမှာလဲ?
– ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျး တညျထောငျရာတှငျတှကွေုံ့ရမညျ့ စိနျခေါ မှုတှကေ ဘာတှလေဲ . . .
– စီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခုတှငျ မသိမဖွဈတဲ့ Marketing , Human Resource Management နဲ့ Financial Accounting တို့ရဲ့ အခွေ ခံ သိသငျ့တဲ့ အရာတှေ ..
– Business Manager တဈယောကျမှာရှိသငျ့တဲအရညျခငျြးတှကေဘာတှလေဲ၊ ဘယျလိုအကငျြ့ကောငျးတှကေိုမှေးမွူသငျ့လဲ အစရှိတာတှကေို Business Management မှာ လလေ့ာရမှာဖွဈပါတယျ။
✔ Management နယျပယျကို စတငျဝငျရောကျမညျ့သူမြား
✔ ကိုယျပိုငျ စီပှားရေးလုပျကိုငျခငျြသူမြား
✔ Business Management အကွောငျးစာတှလေ့ကျတှေ့
?3Nov , 2019 (Sun)⏰ 10 AM – 12 PM
?သငျတနျးကာလ – 1.5 months( 29,000 Ks)
Diploma In Business Management (NCFE,UK)
(အစောဆုံးအပျနှံသူ ၁၅ ဦးအတှကျ သငျတနျးကွေး
129,000 Ks + Free Certificate BM)
?စာရှကျစာတမျးကွေး ထပျပေးစရာမလိုတဲ့အပွငျ ပညာပါရမီမှပေးတဲ့စာအုပျ၊ Recycle အိတျလှလှလေးတှေ၊ဘောပငျတှအေပွငျ Free Class / Free Seminar မြားကိုရာသကျပနျအခမဲ့ တကျရောကျခှငျ့လဲရှိသေးတယျနျော?
Nov လအတှကျ Certificate တနျးခှဲမြား
?️3Nov 2019 (Sun) Time – 8 AM – 10 AM
?️3Nov 2019 (Sun) Time – 10 AM – 12 PM
?3Nov 2019 (Sun) Time – 12 PM –2PM
?3Nov 2019 (Sun) Time –2PM –4PM
?3Nov 2019 (Sun) Time –4PM –6PM
? 17 Nov 2019 (Sun) Time – 8 AM – 10 AM
LCCI level 1,2
? 17 Nov 2019 (Sun) Time –6PM – 8 PM
? 2.5 months( 50,000 Ks)
October လအတှကျ Diploma တနျးခှဲမြား
# ပညာပါရမီကြောငျးသားဟောငျးမြားအတှကျ Discount + Promotin(100,000Ks) နှဈထပျကှမျးခံစားခှငျ့ဖွငျ့ UK Diploma တကျရောကျနိုငျပါတယျနျော ….
– 09 764158055 – 09 978902345 ကိုဆကျသှယျ စုံစမျးနိုငျပါတယျ။
(Ocean Center) အနီးအမှတျ – ၆ ၊ ဒုတိယထပျ၊
တာမှမွေို့နယျ၊ရနျကုနျ။ရှပွေညျ့စုံ စားသောကျဆိုငျ(အပျေါထပျ)၊( ရှညေောငျပငျ – ဆေးခနျး နှငျ့ရှညေောငျပငျ – ဒံပေါကျဆိုငျ ကွား )
2019-10-15 13:14:56 , #ယ​နေ့ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးအလားအလာ(XAUU…
အဖွင့်​ဈေး – 1492
အမြင့်ဆုံးတတ်နိုင်​သောဈေး – 1505
အနိမ့်ဆုံးကျနိုင်​သောဈေး – 1476
Buy -1491/TP – 1494/ SL -1488
Buy – 1476/ TP – 1478/ SL -1473
Sell – 1488/ TP -1486/ SL -1491
Sell – 1505/ TP – 1503/ SL -1508
R1 – 1496.21
R2 – 1499.59
R3 – 1505.05
Pivot Level – 1490.74
S1 – 1485.28
S2 – 1481.9
S3 – 1476.43
1USD – 1531.8 kyats
1SGD – 1111.4 kyats
1Euro – 1687.7 kyats
1GBP – 1873.4 kyats
1 Thai Baht – 50.347 kyats
#CMX ရဲ့ရွှေဈေးသုံးသပ်ချက်များသည် Technical Analysis အရဖြစ်ပြီး အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ပါက like and share ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
နှင့် သင်တန်းများအား စုံစမ်းလိုပါက အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
This entry was posted in Training and Class on 2019-10-15 by admin.
? Forex&Gold Trading?
? Beginner Training?
မြန်မာ့​ရွှေသာမက ကမ္ဘာ့​ရွှေကိုပါ အ​ရောင်းအဝယ်
Forex Market လို့​ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာ့​ရွေနှင့်​ငွေ​ကြေး​ဈေးကွက်ထဲမှာ…
(1) ဘာ​တွေကို အဓိကအ​ရောင်းအဝယ်လုပ်တာလဲ?
(2) ​​​ဘယ်သူ​တွေ အ​ရောင်းအဝယ်လုပ်​နေကြတာလဲ?
(4) ​အရင်းအနှီး​ရော ဘယ်​လောက်လိုအပ်လဲ?
(5) အချိန်​ရော ဘယ်​လောက်​ပေးရမလဲ?
(3) Fundamental Analysis
(4) Candlestick Pattern
(6) Price Target
(7) Risk & Reward
?️Forex Industry နယ်ပယ်မှာ
အ​တွေ့အကြုံ 5နှစ်အထက်ရှိတဲ့ Trainer က
?️Coffee break time လည်း
အဓိကက သင်ယူလိုစိတ်ရှိဖို့ပဲလိုပါတယ် ?
26.10.2019 မှ 30.10.2019 အထိဖြစ်ပါတယ်
?️သင်တန်း​ကြေးက​တော့ 100,000 ကျပ်သာသတ်မှတ်ထားပြီး
​10ရက်​နေ့မတိုင်ခင်အပ်နှံသူများအတွက် 30% discount ​
20ရက်​နေ့မတိုင်ခင်အပ်နှံသူများအတွက် 20% discount
25ရက်​နေ့မတိုင်ခင်အပ်နှံသူများအတွက် 10% discount ​
☘☘ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို စိတ်ဝင်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Trading ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်ဆုံးသင်လုပ်ရမယ့်အရာက သင့်ကိုယ်သင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းပါပဲ ☘☘
ဖုန်းနံပါတ် 09420078953 ကို
အမှတ် 138/142, White Cloud Condo, Unit 4C,
သိမ်ဖြူလမ်း, ရန်ကုန်သို့ ကိုယ်တိုင်လာ​ရောက်အပ်နှံနိုင်ပါတယ်
This entry was posted in Training and Class on 2019-10-14 by admin.
2019-10-12 22:15:53 , Please admin LCCI level1+2 နှ…
LCCI level1+2 နှငျ့ Accounting Trainning Class
စာသငျဝိုငျးဖွဈလို့ ကြောငျးသားတဈယောကျခငျြးကို သခြောလိုကျကွညျ့ပေးတယျ အမှားတှကေို ထိထိမိမိထောကျပွပေးနိုငျပါတယျ
UK exam အောငျမွငျဖို့အာမခံပါတယျရှငျ???
အဲ့လိုအတှကျကြောငျးစညျးကမျးတှကေိုတော့ အောကျမှာဖတျပေးပါရှငျ ???
Sunday only (Section A)
Time: 9:00 to 11:00 (am)
20.10.2019 (Sunday only)
Time: 11:00 to 1:00am⏰⏰
Sunday only (section C)
Time : 1:00 to 3:00 (pm)
ဒါအပွငျ UK exam ကာလ ပွီးရငျ အလုပျဝငျတဲ့အခါ အဆငျပွစေဖေို့အတှကျ Trainning ပါပေးပါသညျ (with Excel )
✔လုပျငနျးခှငျတှငျ အသုံးပွုနသေော စာရှကျစာတမျးမြား??
?-cash book ရေးသှငျးပုံ
?-payment list စာရငျးသှငျးပုံ
?-stock (Inventory) ကုနျပစ်စညျး အဝငျ အထှကျစာရငျး
စတဲ့ လုပျငနျး ခှငျ လကျတှပေါ Trainningမြား
?-Financial Report အထိ သငျကွားပေးမှာဖွဈပါတယျ
?-TAX Knowledge အခှနျပညာဆိုငျရာမြား
✔ -အပွငျ english စာ လလေ့ာပုံ
✔ -Email ပို့ခွငျး email အကောငျ့ဖှငျ့ပေးခွငျးမြား အပါအဝငျ google မှ စာလပေုံ့တှပေါ လမျးညှနျသငျပွပေးပါတယျ
#သငျတနျးပွီးသှားရငျ အလုပျရှာနသေူမြားအတှကျ အလုပျပါ ရှာပေးပါသညျ
၈သောငျး ၅ထောငျ ကပျြ for level 1+2 and Trainning)
Present မြားပေးပါတယျ ?
2.ပေးလိုကျသော အိမျစာတှကေို အိမျစာ စာအုပျသီးသနျ့ထားရှိပွီး အိမျစာလုပျလာခဲ့ရပါမယျ
3. အိမျစာ စာအုပျတှကေို အတနျးမစခငျ ခုံပျေါမှာ ထပျပေးထားရပါမယျ အိမျစာမလုပျလာတာ အိမျစာ စာအုပျမကေ့နျြခဲ့သူမြားကို fine ကောကျပါမယျ (3ကွိမျအထိ စာမလုပျလာပါက သငျတနျးကြောငျးမှ လကျခံတော့မညျမဟုတျပါ)
4. မလိုကျနိုငျတဲ့ စာတှရှေိရငျ viber group ထဲမှာ စာမေးစာဖွလေုပျလို့ရပါတယျ
6. EXAM ဖွခေါနီးရငျ အခြိနျပိုချေါပါ့မယျ (ကြောငျးသားတှနေဲ့ အခြိနျညှိပွီး)
7. ကြောငျးသငျတနျး ခှငျ့မတိုငျပဲ ၂ကွိမျ ပကျြရငျ စာလုံးဝပွနျမသငျပေးပါ
8. UK EXAM ဖွဖေို့ ကြောငျးမှ တာဝနျယူဆောငျရှကျပေးမှာဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ စာတဈခုတညျးသာ အာရုံစိူကျပေးဖို့လဲ ပွောခငျြတယျ
ကြောငျးမှာ test 5ကွိမျ ဖွဆေိုရပါတယျ 5ကွိမျမှာ အမှတျအမြားဆုံးရရှိသူမြား ကြောငျးတကျမှနျသူမြားကို အမှတျတရ ဒိုငျးဆုမြားနှငျ့ ခြီးမွှငျ့ပေးမှာလဲ ဖွဈပါတယျ ??
အမှတျ ၈၆၀.ထူပါရုံ ၁၄လမျးအနောကျ သာကတေမွို့နယျ
တိုကျ A -5လှာ
This entry was posted in Training and Class on 2019-10-12 by admin.
2019-10-10 10:25:39 , Computer အိမ်အရောက် သင်ပေးသည်။…
Computer အိမ်အရောက် သင်ပေးသည်။ Computer Basic Advance Excel 09692779619(Ygn)
This entry was posted in Training and Class on 2019-10-10 by admin.